Wyndham Hotels & Resorts yakatumidzwa nzvimbo yakanakisa yekushandira LGBTQ Kuenzana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Wyndham Hotels & Resorts yakatumidzwa nzvimbo yakanakisa yekushandira LGBTQ Kuenzana
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Human Rights Campaign inoshandisa zviyero zvinoenderana neyakaenzana mabhenefiti evashandi veLGBTQ nemhuri dzavo; isiri-rusarura marongero kune ese mabhizinesi masangano; kutsigira tsika inosanganisa; uye mubatanidzwa wemagariro mutoro
Wyndham Hotels & Resorts yazivisa nhasi kuti yakawana zvibodzwa zvakakwana zana pa100 Corporate Equality Index (CEI), ongororo yenyika yekuenzanisa uye mushumo wezviito zvine chekuita nekuenzana kweLGBTQ munzvimbo yebasa, inotungamirwa neHuman Rights Campaign. Rukudzo runoratidzira Wyndham wechitatu akateedzana gore achiwana zvibodzwa zvakakwana paECI, ichidoma kambani seNzvimbo Yakanyanya Kushanda yeLGBTQ Kuenzana.
“Kuziva uku kunoratidza kuzvipira kwedu kunotora nekuchengetedza vashandi vanoratidza kusiyana kwevaeni vedu, varidzi nenharaunda pasi rese. Takazvipira kuumba hunhu hwemabasa hunobatanidzwa apo nhengo dzese dzechikwata dzinogona kubudirira, "anodaro Geoffrey A. Ballotti, mukuru mukuru, Wyndham Mahotera & Resorts. "Ichiziva kuti kubatanidza kusanganisa ibhizimusi rakanaka, Wyndham Hotels & Resorts inokwezva vatengi vakasiyana, vachirima mamiriro ekugamuchira mumahotera ayo, pamusoro pekutsigira nhengo dzechikwata chayo."
Wyndham Hotels & Resorts iri pakati pemabhizinesi e1,142 akayerwa mushumo wegore rino. Human Rights Campaign inoshandisa zviyero zvinoenderana neyakaenzana mabhenefiti evashandi veLGBTQ nemhuri dzavo; isiri-rusarura marongero kune ese mabhizinesi masangano; kutsigira tsika inosanganisa; uye mubatanidzwa wemagariro mutoro. Iwo maECI anotara vashandirwi vanopa dziviriro yakakosha kune vanopfuura mamirioni gumi nemasere evashandi veUS uye mumwezve 18 miriyoni kunze kwenyika. Makambani akayerwa muECI anosanganisira magazini yeFortune mazana mashanu emabhizimusi makuru anotengeswa neruzhinji, American Lawyer magazini epamusorosoro emabhizimusi emitemo mazana maviri (AmLaw 17), uye mazana emabhizimusi epamusorosoro uye epachivande.
Kuzvipira kwaWyndham kutsigira nharaunda yeGBBTQ kunoonekwa mukati nekunze kwekambani:
Mukutsigira kukurudzira nharaunda inosanganisirwa apo nhengo dzechikwata chedu dzinonzwa kugadzikana kuva kwavo chaiko, isu takaparura mushandirapamwe musi waGumiguru 21, 2020-International Pronouns Day yekusimudzira kuziva nezve zvirevo uye kuti nhengo dzeboka redu dzinogona kuzvisarudzira kana vakasarudza ita saizvozvo.
Mu2019, Wyndham Hotels & Resorts akabatana neHRC Bhizinesi Rekubatana kweiyo Equality Act, boka revatungamiriri veUS vanoshandira vanotsigira Mutemo Wekuenzana.
Wyndham inopa huwandu hwakawanda hwezvakasiyana uye zvekuisirwa zviwanikwa zvemitezo yetimu uye hutungamiriri hwevakuru, kusanganisira mukuru weSocial Responsibility Council uye Pride, iri bhizinesi reboka.
Wyndham Hotels & Resorts zvakare vanobatana nemasangano anotungamira anosanganisira HRC, National Gay & Lesbian Chamber of Commerce uye International Gay & Lesbian Travel Association.